” ချစ်လိုက် (MusicSeries) Part 1; 2;3ဇာတ်သိမ်းထိ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ကြည့်ရူသူ သန်းချီ ထိ အားပေးခဲ့ကြလို့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တဲ့ ထက်ယံ” 13 mins agoAdd Commentby candy - Myannewsmedia
” ချစ်လိုက် (MusicSeries) Part 1; 2;3ဇာတ်သိမ်းထိ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ကြည့်ရူသူ သန်းချီ ထိ အားပေးခဲ့ကြလို့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တဲ့ ထက်ယံ” 13 mins agoAdd Commentby candy
ပရိသတ်ကြီးရေ ထက်ယံလို့ြေ ပာလိုက်တာနဲ့ မိန်းမသားထြူ ကီးရဲ့ အသည်းကျော် အဆိုတော်တ စ်ယောက်ဆိုတာ ပြောစရာမ လိုလောက်အောင်ပါပဲနော်။ ဆယ်ကျော်အ ရွယ်တွေကနေ မမေ တွထိ အသည်းခိုက်ရအောင် အမူအရာလေးတွေနဲ့သီချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေတတ်တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေပါ နှစ်သက်ရ တဲ့ထိပါပဲ။
လတ်တေ လာမှာတော့ အသစ်ထွက် ရှိခဲ့တဲ့ထက်ယံရဲ့ သီချင်း( ၃)ပု ဒ်ကတော့ ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာေ ရပန်းစားကာ အဟော့ဆုံးဖြစ်နေတာပါနော်။ တကယ့်ကို နာမည်ကြီးချ စ်သူဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ အောင်ရဲလ င်းနဲ့နေခြည်ဦးတို့ ပထမဆုံးတွဲဖ က်ရိုက်ကူး​ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ သီချင်း၃ပု ဒ်ကို Story တစ်ခုဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း “ကျနော့်ရဲ့ချစ် လိုက် (MusicSeries) Part 1; 2;3ဇာတ် သိမ်းထိ နာရီပိုင်းအ တွင်းမှာ ကြ ည့်ရူသူ Millions ထိ အားပေးခြဲ့ ကသူတိုင်းအားေ ကျးဇူးတင်ပါတ ယ် မေးချင် တာကေ တာ့ကျေနပ်လား ?? “ဆိုတဲ့စာလေး နဲ့ကျေးဇူးတင်စ ကားပြောခဲ့တာပါ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ြ ကီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတ စ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
Source : Htet Yan
ပရိသတျ ကွီးရေ ထကျယံလို့ပွောလိုကျတာနဲ့ မိနျးမသားထူကွီးရဲ့ အသ ညျးကြျော အဆိုတျော တဈယောကျဆိုတာ ပွောစရာမလိုလောကျအောငျပါပဲနျော။ ဆယျကြျောအရှယျတှေ ကနေ မမတှထေိ အသညျးခို ကျရအောငျ အမူအ ရာလေးတှေ နဲ့သီခြ ငျးတှကေိုဖြျောဖွတေတျတဲ့အပွငျ သူ့ရဲ့သီခငျြး တှကေို ယောကျြား လေးပရိသတျတှေ ပါ နှဈသကျရတဲ့ထိပါပဲ။
လတျတ လောမှာတော့ အသဈထှကျရှိ ခဲ့တဲ့ထကျယံရဲ့ သီခငျြး( ၃)ပုဒျက တော့ ပရိသတျတှေ ပါးစပျဖြားမှာရပေနျးစားကာ အဟော့ဆုံးဖွဈနတောပါနျော။ တကယျ့ကိုနာမညျကွီးခဈြသူဟောငျးတှဖွေဈကွတဲ့ အောငျ ရဲလငျးနဲ့နခွေ ညျဦးတို့ ပထမဆုံးတှဲဖကျ ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး အပိုငျး၃ပိုငျးနဲ့ သီခငျြး၃ ပုဒျကို Story တဈခုဖွဈ အောငျ ရိုကျကူးခဲ့တာကွောငျ့လညျးဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး “ကနြေျာ့ရဲ့ ခဈြလိုကျ (MusicSeri es) Part 1; 2;3ဇာ တျသိမျးထိ နာရီပိုငျး အတှငျးမှာ ကွညျ့ ရူသူ Millions ထိ အားပေးခဲ့ကွသူ တိုငျးအားကြေးဇူးတ ငျပါတယျ မေးခငျြတာကတော့ကနြေပျလား ?? “ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ကြေးဇူးတငျစကားပွောခဲ့တာပါ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျ ကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလို ကျပါတယျနျော။
Previous post ” အခုလိုstay homeကာလမှာအတိုးချကာ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ TikTokတွေဆော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ရတနာမိုင်”
Next post မကြာခင်မှာ ရွှေလက်တွဲရမယ့် ချစ်သူ အောင်လအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း